Izolo sikubonise imifanekiso ye-Samsung Galaxy Pro kwaye sikubonise imifanekiso yayo yokuqala. Kodwa ayisiyiyo kuphela i-smartphone entsha evela kumenzi waseMzantsi Korea. Ke ngoko, namhlanje sifuna ukugqibezela ulwazi ngokukunika lonke ulwazi ofanele ukwazi ngalo I-Samsung Galaxy Mini, esele sithethile ngayo kodwa ethi, ngokwemithombo eyahlukeneyo, ayizukuthatha thuba lide ukufika. Ngapha koko, yonke into ibonisa ukuba kwiintsuku ezizayo iyakwaziswa e-United Kingdom, ibambene ne umsebenzisi wefowuni O2.
Ukuba izolo sikuxelele ukuba i-Galaxy Pro iza kukhuphisana nee-smartphones kwicandelo loshishino kwaye zibandakanya ikhibhodi ebonakalayo ye-QWERTY, ngakumbi noPhando kwiMotion (RIM) iBlackBerry, I-Mini Mini Yenzelwe ukuba ijongane neefowuni ezingabizi kakhulu ezinje ngeSony Ericsson Xperia X10 Mini.
Njenge-Glaxy Pro, I-Galaxy Mini iya kuqhuba i-Android 2.2 Froyo, nangona kuqikelelwa ukuba uhlaziyo lwayo ukuya I-Android 2.3 Isonka sejinja ayizukuthatha thuba lide. Kwelinye icala, iscreen sale fowuni intsha yakwaSamsung siya kuba nee-intshi eziyi-3,14 ubukhulu kunye nee-pixels ezingama-320 × 240 zesisombululo, siya kuthi sixhotyiswe ngeprosesa ye-600 MHz Snapdragon, kwaye iya kuba nekhamera engasemva yesisombululo se-3 megapixel.
Ukusuka kumzi mveliso kuya kuza ne-2GB yememori yangaphakathi, kodwa ungayandisa ukuya kuthi ga kwi-32 GB ngamakhadi e-MicroSD.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy Mini, yazisa
Kodwa le mobile ayithengisanga iYoigo iveki ...?
Ewe bendinayo esandleni, nge-8, nge-15 ndiyichola, ndiyenza ukuphatha.
Ngaba le fowuni inayo i-tv okanye ayinayo?
Ukuze usebenzise i-gpsd ufuna ikhredithi ???
hayi ndinayo kwaye andiyidingi kwaphela
M @ ri @ sitsho
baya kuthengela mna
NgoMvulo ndinayo ukuphela
Ndinayo yeenkosi XD
PEPE UMZALWANE OMKHULU
NDIYAYITHANDA LE MOBILE JEJE
UJuanjo Edreira sitsho
Ndifuna indlela yengqesho